Akanakisa Mazambiringa Mbeu Bvisa Mugadziri uye Fekitori | CCGB
ZveEurope mbishi zvigadzirwa, hombe-pamwero kugadzirwa
Muchero wembeu yemazambiringa ipuru-tsvuku yeupfu yakatorwa kubva kuEurope yemhando yepamusoro yemazambiringa, mushure mekudzora kwecountercurrent, kuongorora resin, kumisikidza uye kuomesa spray. Inonyanya kushandiswa mune zvehutano, zvipoda uye mimwe minda.
Kunobva Botanical: Mbeu yemuzambiringa yechiFrench
Basa: Dhivha yembeu yemazambiringa inogona kunyatso bvisa yakawandisa emahara radical kubva mumuviri wemunhu uye ine inoshamisa mhedzisiro pakurwisa-kukwegura uye kuwedzera hutachiona.
1.Kuenzanisa pakati peUSP standard uye CCGB mhando
◆ USP mureza mharidzo
GB CCGB Mazambiringa Mbeu Inobvisa
Mhedziso: Inofananidzwa neUSP standard muyero mufananidzo, hunhu hwezvigadzirwa zvedu zvinoenderana neiyo USP standard sampuro, uye oligomeric proanthocyanidins zvemukati zvakakwirira kupfuura zvakajairwa.
2.Authenticity kuzivikanwa kwemazambiringa mbeu inobviswa
Seed Natural Grape mbeu Bvisa kubva kuCCGB
Seed Mbeu yeMazambiringa Yakabikwa yakasanganiswa ne1% Peanut Skin Extract
Seed Mbeu yeMazambiringa Yakabikwa yakasanganiswa ne1% Pine Bark Bvisa
Mhedziso:YEMAHARA DZIVA MBEU DZIMWEWO ine yakasarudzika 7 mamakisi epamusoro uye hunhu hwepamusoro hweOTC hwakaenzana, nepo kana ikasanganiswa nenzungu reganda nzungu kana pine bark yakabviswa, chimiro chakasiyana zvachose. CCGB inopa iyo yemazambiringa mbeu yembeu inotorwa chete uye inogona kusiyanisa kana iyo sampuro iri 100% yakasikwa.
1.Tinosarudza mhando yemhando yepamusoro yemazambiringa echiFrench senge mbishi, kuitira kuti chigadzirwa chive nehunhu hwakanaka uye zvakakwirira zveoligomeric proanthocyanidins. Hunhu uye yakatarwa bvunzo chiyero chinoratidza chigadzirwa chedu mhando uye inopa vimbiso kumutengi wedu
2.Made Kubva kuEuropean Premium Grape Mbeu
Isu tinotenga anoda kusvika zviuru zvishanu ematani embeu dzemhando yepamusoro dzeEurope gore rega, kuitira kuti chigadzirwa chive nehunhu hwakanaka uye zvakakwirira zveoligomeric proanthocyanidins zvemukati. Hunhu uye yakatarwa bvunzo chiyero chinoratidza chigadzirwa chedu mhando uye inopa vimbiso kune vatengi vedu.
3.Large-scale, Inoenderera Uye Yakazvigadzira Kugadzira
Tinezvangu-zvakagadziriswa zvinowirirana nemidziyo yekubvisa michina, tinogona kudyisa makumi matatu matani zvigadzirwa muzuva rimwe, izvo zvinogona kupa vatengi kugadzikana kupihwa zvigadzirwa.
Mazambiringa Mbeu Inobvisa Proanthocyanidins 95
Mazambiringa Mbeu Inobvisa Polyphenol 80%
Pashure: Ginger extrac